Quinidine (ကွီနီဒင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Quinidine (ကွီနီဒင်း)
Quinidine (ကွီနီဒင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Quinidine (ကွီနီဒင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Quinidine (ကွီနီဒင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Quinidine ကို နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း (နှလုံးစည်းချက်မမှန်ခြင်း ဥပမာ atrial fibrillation) အား ကာကွယ်ကုသရန် အသုံးပြုပါသည်။
Quinidine က နှလုံးခုန်နှုန်းမမှန်သည့်အရေအတွက်ကို နည်းစေခြင်းဖြင့် ပုံမှန်လုပ်ငန်းများလုပ်နိုင်စွမ်းကို တိုးတက်စေပါသည်။ သို့သော် သင်၏ နှလုံးခုန်မူမမှန်ခြင်းများအားလုံးကို ပျောက်စေမည် မဟုတ်ပါချေ။ ၎င်းက မူမမှန်သည့် နှလုံးခုန် အချက်ပြများအား တားပေးခြင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်၏။
Quinidine ကို မသုံးခင်နှင့် သုံးပြီးနောက်တွင် နှလုံးသွေးမခဲစေရန်၊ သွေးခုန်နှုန်းနှေးသွားစေရန် ဆရာဝန်က တခြားဆေးများ (သွေးကျဲဆေး ဥပမာ ဝါဖရင်၊ ဘီတာဘလော့ကာ ဥပမာ metoprolol) တို့ကို ညွှန်ပါလိမ့်မည်။
Quinidine (ကွီနီဒင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဤဆေးကို အစာရှိရှိ မရှိရှိ ရေတစ်ဖန်ခွက်အပြည့် (8 ounces/240 milliliters) နှင့် ဆရာဝန်ညွှန်သည့်အတိုင်းသောက်ရမည်။ ဤဆေးကို အစာမရှိပဲသောက်ပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်သော်လည်း အစာနှင့်တွဲသောက်ခြင်းက ဗိုက်နာခြင်းကို လျော့ချပေးနိုင်ပါသည်။ ဆေးသောက်ပြီး ၁၀ မိနစ်လောက်ထိအောင် လှဲလျောင်းခြင်းမပြုရပါ။
extended-release ဆေးပြားများကို ချေခြင်း ဝါးခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။ ထိုသို့လုပ်ပါက ဆေးများ ချက်ချင်းထွက်လာပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်ချေကို ပိုများစေပါလိမ့်မည်။ ထို့အတူ ဆရာဝန် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်မှမညွှန်ကြားဘဲ ဆေးကိုခွဲခြမ်းသောက်ခြင်းများ မလုပ်ရပါ။ မကျိတ်မဝါးဘဲ ဆေးတစ်လုံးလုံးကိုမျိုးချရပါမည်။
ဤဆေးအား ကုမ္ပဏီအမျိုးမျိုးမှ ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ အားလုံး တူညီသောအကျိုးအာနိသင် ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကိုမပြောဘဲ ဆေးကုန်ပြောင်းခြင်း မလုပ်ပါနှင့်။ ဆေးပမာဏမှာ သင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် ကုသမှုအားတုံ့ပြန်မှုတို့တွင် အခြေခံပါသည်။ regular-release quinidine ကိုသုံးသည်ဆိုပါက တစ်နေ့လျှင်4g ထက်ပိုမသုံးသင့်ကြောင်း ညွှန်ထားပါသည်။
ဂရိတ်ဖုသီးစားခြင်း၊ ၎င်းဖျော်ရည်သောက်ခြင်းများကို ရှောင်ပါ။ ဂရိတ်ဖုအရည်သည် သွေးတွင်းမှ တစ်ချို့ဆေးများ၏ပမာဏကို ပြောင်းလဲစေတတ်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိလိုပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်နှင့် ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။
အစားအသောက်များတွင် ဆားပိုထည့်စားခြင်းမျိုးလည်း မလုပ်ရပါ။ အစားအသောက်တွင်ပါသော ဆားပမာဏသည် Quinidine စုပ်ယူမှုအား အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။ အသေးစိတ်သိလိုပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်နှင့် ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။
ဤဆေးမှ အာနိသင်အပြည့်အဝရစေရန် ဆေးကို မှန်မှန်သောက်ပါ။ မှတ်မိနေစေရန်အတွက် နေ့စဉ် တူညီသောအချိန်တွင်သာသောက်ပါ။
Quinidine (ကွီနီဒင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Quinidine ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထား ပျက်ယွင်းမှုများ မဖြစ်စေရန် Quinidine ကို ရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Quinidine ဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ ကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းသောပုံစံ ကွဲပြားခြားနားမှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသော သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား မေးမြန်းခြင်းကို အမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာတွင်ထားပါ။
Quinidine အားအိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းမျိုးအား မလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကို မလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့် အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
Quinidine (ကွီနီဒင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Quinidine ကိုမသောက်ခင် ဤဆေးနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း သို့မဟုတ် တခြားသောဓါတ်မတည့်မှုများရှိပါက ဆရာဝန်ကိုကြိုပြောပါ။ ဤဆေးတွင် သင့်နှင့်ဓါတ်မတည့်နိုင်သည့် inactive ဓါတ်ပစ္စည်းများ ပါနေနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိလိုပါက ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်နှင့် ဆွေးနွေးပါ။
ဤဆေးကိုမသုံးခင် သင့်ကျန်းမာရေးရာဇဝင်များကို ဆရာဝန်သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်အား ပြောပြပေးပါ။ အထူးသဖြင့် တစ်ချို့သော နှလုံးရောဂါများ (incomplete or complete heart block without an artificial pacemaker, torsades-type irregular heartbeats, digitalis toxicity)၊ သွေးပေါင်တအားနည်းခြင်း၊ သွေးထွက်လွယ်ခြင်း၊ အညိုအမည်းစွဲလွယ်ခြင်း (thrombocytopenic purpura)၊ ကြွက်သားအားနည်းခြင်း (myasthenia gravis)၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အသည်းရောဂါ၊ သွေးရောဂါတစ်ချို့ (G6PD ချို့တဲ့ခြင်း)၊ ပန်းနာရင်ကြပ်၊ လက်ရှိပိုးဝင်ပြီးဖျားနေခြင်း။
Quinidine သည် နှလုံးစည်းချက်ကိုသက်ရောက်သော အခြေအနေတစ်ခု ဖြစ်စေနိုင်သည် (QT prolongation)။ QT prolongation သည် နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ မူးမေ့လဲခြင်းများကို ရှားရှားပါးပါးဖြစ်စေတတ်ပြီး ဆေးကုသမှုချက်ချင်းခံယူရန် လိုအပ်ပါသည်။
QT prolongation ဖြစ်နိုင်ချေသည် သင့်၌ တစ်ချို့ရောဂါများရှိသည့်အခါ သို့မဟုတ် QT prolongation ဖြစ်စေသည့်ဆေးများ သုံးနေရသည့်အခါတွင် ပိုတိုးလာနိုင်၏။ Quinidine မသုံးခင် အဆိုပါဆေးများသုံးနေရကြောင်း သို့မဟုတ် အောက်ပါရောဂါများရှိကြောင်း ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်းကိုပြောပါ – နှလုံးရောဂါများ (နှလုံးညှစ်အားမကောင်းခြင်း၊ နှလုံးခုန်နှုန်းနှေးခြင်း၊ ECG တွင် QT prolongation ပြခြင်း)၊ မျိုးရိုးရှိသော နှလုံးရောဂါများ (ECG တွင် QT prolongation ပြခြင်း၊ ရုတ်တရတ်နှလုံးရပ်သေဆုံးခြင်း)။
ခန္ဓါကိုယ်တွင်း၌ ပိုတက်စီယမ်၊ မဂ္ဂနီစီယမ်နည်းခြင်းတို့ကလည်း QT prolongation ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ တစ်ချို့ဆေးများ (ဆီးဆေးများ) သုံးလျှင် သို့မဟုတ် ချွေးထွက်လွန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ အန်ခြင်းတို့ရှိလျှင်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေပိုများပါသည်။ Quinidine ကို စိတ်ချလက်ချသုံးနိုင်ရန်အတွက် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ဆေးကြောင့် ခေါင်းမူးနိုင်သည်။ အရက် သို့မဟုတ် ဆေးခြောက်ကလည်း ခေါင်းမူးနိုင်သည်။ စိတ်ချရသည့်အခြေအနေမရောက်မချင်း နိုးကြားရန်လိုသည့် စက်မောင်ခြင်း၊ ယာဉ်မောင်းခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနှင့်။ အရက်ပါသော အချိုရည်သောက်ခြင်းကို ကန့်သတ်ပေးပါ။ ဆေးခြောက်သုံးနေသူဆိုပါက ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးပါ။
အသက်ကြီးသူများသည် ဤဆေး၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်သော ခေါင်းမူးခြင်း၊ QT prolongationတို့ ပိုဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အမှန်တကယ်လိုအပ်မှသာ ဆေးကိုသုံးပါ။ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးများအတွက် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Quinidine (ကွီနီဒင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များ မရှိပါ။ ဆေးမသုံးစွဲမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် C ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။
Quinidine (ကွီနီဒင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ လည်ချောင်း ရင်ဘတ်ထဲတွင် ပူနေခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ပျောက်မသွားလျှင် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာလျှင် ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကို ချက်ချင်းပြောပါ။
ပြင်းထန်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်သော အမြင်အာရုံပြောင်းခြင်း၊ မျက်လုံးနာခြင်း၊ ကြွက်သားနာခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ ချွေးထွက်ခြင်း၊ တုန်ယင်ခြင်း (သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကျခြင်း)၊ အကြောင်းမရှိပဲ ဖျားခြင်း၊ ပိုးဝင်သည့်လက္ခဏာများ (လည်ပင်းနာနေခြင်း)၊ သွေးထွက်လွယ်ခြင်း၊ အညိုအမည်းစွဲလွယ်ခြင်း၊ မျက်လုံး အရေပြား ဝါခြင်း၊ လူးပစ်ရောဂါကဲ့သို့ လက္ခဏာများ (အဆစ် ကြွက်သားများ နာခြင်း၊ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း) စသည်တို့ ဖြစ်လာလျှင် ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းပြောပါ။
ဆိုးဝါးသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်သော ပြင်းထန်စွာခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မူးလဲခြင်း၊ ရုတ်တရတ် နှလုံးခုန်နှုန်းပြောင်းခြင်း (မြန်/နှေး/ပုံမှန်မဟုတ်) စသည်တို့ဖြစ်လာပါက ဆေးကုသမှု ချက်ချင်းခံယူပါ။
ဤဆေးကြောင့် ပြင်းထန်သည့်ဓါတ်မတည့်ဖြစ်ခြင်းမှာ ရှား၏။ အောက်ပါပြင်းထန်ဓါတ်မတည့် လက္ခဏာများဖြစ်လာပါက အရေးပေါ်ကုသမှုများ ခံယူရပါမည် – အကွက်ထခြင်း၊ ယားခြင်း၊ ရောင်ခြင်း (အထူးသဖြင့် မျက်နှာ၊လျှာ၊ လည်ချောင်း)၊ ခေါင်းတအားမူးခြင်းနှင့် အသက်ရှူရခက်ခြင်း။
ဆေးကိုတစ်ကြိမ်တည်းသောက်ရုံနှင့်ပင် ဓါတ်ပြုမှုတစ်မျိုး (cinchonism) ဖြစ်လာနိုင်သည်။ နားထဲတွင် တစီစီမြည်နေခြင်း၊ ရုတ်တရတ် အကြားအာရုံပြဿနာပေါ်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အမြင်ေဝဝါးခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းတို့ ဖြစ်လာပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်းကို ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။ သင့်ဆေးပမာဏကို ချိန်ညှိရန် လိုနိုင်ပါသည်။
တစ်ချို့သော ကြာရှည်အာနိသင်ပြ Quinidine ဆေးအမျိုးအစားများသည် ဝမ်းထဲသို့ အလုံးလိုက်ပြန်ပါတတ်၏။ ဆေးအားလုံးစုပ်ပြီး ကျန်နေခဲ့သော ဆေးလုံးခွံမျှသာဖြစ်သည်။ အန္တရာယ်မရှိပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Quinidine (ကွီနီဒင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Antacids ပမာဏအများကြီးသောက်ခြင်း (sodium bicarbonate), arbutamine, aripiprazole, atomoxetine, carbonic anhydrase inhibitors (ဥပမာ – acetazolamide), cisapride, etravirine, fingolimod, fosamprenavir, loperamide, တစ်ချို့သော macrolide ပဋိဇီဝဆေးများ (ဥပမာ – erythromycin, clarithromycin), phenytoin, propafenone, quinupristin/dalfopristin, rifamycins (rifampin, rifabutin).
Quinidine အား ခန္ဓါကိုယ်မှဖယ်ထုတ်ရာတွင် သက်ရောက်မှုပေးသော ဆေးများသည် Quinidine အာနိသင်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ -cobicistat, mifepristone, တစ်ချို့သော azole မှိုသတ်ဆေးများ (fluconazole, itraconazole, ketoconazole, posaconazole, voriconazole), တစ်ချို့သော protease inhibitors (ဥပမာ nelfinavir, ritonavir, tipranavir) စသည်။
ဤဆေးသည် တခြားဆေးများအား ခန္ဓါကိုယ်မှ ဖယ်ထုတ်ရာ၌ နှေးကွေးစေနိုင်ပြီး ထိုဆေးများ၏အာနိသင်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ -aliskiren, codeine, digoxin, mefloquine, tricyclic antidepressants (such as desipramine, imipramine) စသည်။
Quinidine အပြင် တခြားဆေးများသည်လည်း နှလုံးစည်းချက် (QT prolongation) ပေါ် သက်ရောက်မှုရှိ၏။ ဥပမာ -artemether/lumefantrine, ranolazine, toremifene, antiarrhythmic ဆေးများ (ဥပမာamiodarone, disopyramide, dofetilide, dronedarone, ibutilide, procainamide, sotalol), စိတ်ရောဂါကုဆေးများ ( pimozide, thioridazine, ziprasidone), တစ်ချို့သော quinolone ပဋိဇီဝဆေးများ (grepafloxacin, sparfloxacin) စသည်။
Quinidine သည် quinine နှင့်အတော်တူ၏။ Quinidine သုံးနေစဉ် quinine ပါသောဆေးများ မသုံးရပါ။
Quinidine သည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့် တခြားသောဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးအာနိသင်ပြောင်းခြင်းနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သောဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများ မဖြစ်လာစေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်သည့်အခါ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏပြောင်းလဲခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Quinidine (ကွီနီဒင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Quinidine က အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Quinidine (ကွီနီဒင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Quinidine သည် သင်၏ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားပိုဆိုးသွားစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Quinidine (ကွီနီဒင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ဆေးပြား (Sulfate): 100 to 600 mg/dose နှုန်းဖြင့် ၄-၆ နာရီခြားတိုင်းသောက်ရမည်။ 200 mg/dose နှုန်းနှင့်ဟရပြီး လိုအပ်သည့်အာနိသင်ရအောင် ညှိယူရပါမည်။ (နေ့စဉ်သုံးနိုင်သည့် အများဆုံးပမာဏ –3to4g)
Extended Release:324 to 648 mg (gluconate) ကို ၈-၁၂ နာရီခြားတိုင်း သောက်ရန် သို့မဟုတ် 300 to 600 mg (sulfate)၈-၁၂ နာရီခြားတိုင်း သောက်ရန်။
ထိုးဆေး: quinidine gluconate800 mg အား 50 mL ရအောင်ဖျော်၍ 1 mL/min နှုန်းထက် မကျော်စေပဲ အကြောဆေးသွင်းရပါမည်။
Test Dose:200 mg quinidine sulfate ဆေးပြား သို့မဟုတ် quinidine gluconate အသားထိုးဆေးအား idiosyncratic reaction ဖြစ်နိုင်ချေကို ချိန်ဆပြီး သုံးရန်။
Loading dose: quinidine gluconate24 mg/kg ကို 250 mL ရအောင်ဖျော်၍ ၄ နာရီကြာအောင်သွင်းရန်။
ထိန်းညှိပမာဏ: ၂၄ နာရီအတွင်း စပေးရပါမည်။ quinidinegluconate12 mg/kg ကို 250 mL ရအောင်ဖျော်၍၄ နာရီကြာအောင်သွင်းရန်။ ၈ နာရီခြားတိုင်း တစ်ခါသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ၇ ရက်အကြာ သို့မဟုတ် သောက်ဆေးပြောင်းနိုင်သည်အထိ ပေးရမည်။
Loading dose: quinidine gluconate10 mg/kg ကို 250 mL ရအောင်ဖျော်၍ ၁-၂ နာရီကြာအောင်သွင်းရန်။
ထိန်းညှိပမာဏ:quinidinegluconate0.02 mg/kg/min နှုန်းနှင့်၇၂ နာရီကြာအောင်ပေးရမည်။
လူနာသည် ၄၈ နာရီအတွင် quinidine40 mg/kg ထက်ပို၍ လက်ခံထားရလျှင် သို့မဟုတ် ၁၂ နာရီအတွင်း mefloquine လက်ခံထားရလျှင် loading dose ကို ဖြုတ်နိုင်သည်။
ပိုးကောင်ရေမှာ ၁% အောက် နည်းသွားပါက သောက်ဆေးကိုပြောင်းပါ။ လူနာသည် သောက်ဆေးနှင့် ဆေးရက်အပြည့်သွားရပါမည်။ ဆေးရက်အပြည့် (quinidine/quinine) မှာ အာဖရိကနှင့် တောင်အမေရိကတွင် ၃ ရက်၊ အရှေ့တောင်အာရှတွင် ၇ ရက်ဖြစ်ပါသည်။ doxycycline, tetracycline သို့မဟုတ် clindamycin တို့နှင့် တွဲသုံးရ၏။
Creatinineclearance မှာ 10 mL/minute အောက် နည်းနေလျှင် ပုံမှန်ပမာဏ၏ ၇၅% သာ ပေးရမည်။
ထိန်းညှိပမာဏကို ၅၀% လျော့ပြီး သွေးတွင်းလယ်ဗယ်များကို စောင့်ကြည့်ရမည်။
Quinidine သည် အနည်းငယ် hemodialyzable (5%-20%) ဖြစ်နိုင်သည်။ hemodialysis လုပ်ပြီးနောက် ထပ်ဖြည့်ဆေးပမာဏ 200 mg ကို ပေးရန် ညွှန်ထား၏။ Quinidine ကို peritoneal dialysis လုပ်ရာတွင် မဖယ်ထုတ်နိုင်ပါ။
၈ နာရီခြားတိုင်းသောက်ရသော 648 mg (gluconate) ပမာဏထက်များခြင်း သို့မဟုတ် ၆ နာရီခြားတိုင်းသောက်ရသော 600 mg (sulfate) ပမာဏများခြင်းကို ကိုယ်အလေးချိန်များသော လူနာများမှလွဲ၍ မပေးရပါ။
ကလေးတွေအတွက် Quinidine (ကွီနီဒင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Test Dose: 200 mg quinidine sulfate ဆေးပြား သို့မဟုတ် quinidine gluconate အသားထိုးဆေးအား idiosyncratic reaction ဖြစ်နိုင်ချေကို ချိန်ဆပြီး သုံးရန်။
Loading dose: quinidine gluconate 24 mg/kg ကို 250 mL ရအောင်ဖျော်၍ ၄ နာရီကြာအောင်သွင်းရန်။
ထိန်းညှိပမာဏ: ၂၄ နာရီအတွင်း စပေးရပါမည်။ quinidine gluconate 12 mg/kg ကို 250 mL ရအောင်ဖျော်၍ ၄ နာရီကြာအောင်သွင်းရန်။ ၈ နာရီခြားတိုင်း တစ်ခါသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ၇ ရက်အကြာ သို့မဟုတ် သောက်ဆေးပြောင်းနိုင်သည်အထိ ပေးရမည်။
Loading dose: quinidine gluconate 10 mg/kg ကို 250 mL ရအောင်ဖျော်၍ ၁-၂ နာရီကြာအောင် သွင်းရန်။
ထိန်းညှိပမာဏ: quinidinegluconate 0.02 mg/kg/min နှုန်းနှင့် ၇၂ နာရီကြာအောင်ပေးရမည်။
Quinidine (ကွီနီဒင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Quinidine ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
သောက်ဆေးပြား extended release
Quinidine ကိုသုံးစွဲဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့်အချိန်တွင် အမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါက လွတ်သွားသောအကြိမ်ကိုကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်၌ပင်သုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးတာမျိုး မလုပ်ပါနှင့်။
Bounding pulse (သွေးခုန်နှုန်းပြင်းထန်ခြင်း (ဘောင်းဒင်းပါ့စ်))